साउनदेखि काठमाडौं–गुवाहाटी उडान गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा, कोलकाता कहिलेदेखि उड्छ ? | गृहपृष्ठ
Home बजार साउनदेखि काठमाडौं–गुवाहाटी उडान गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा, कोलकाता कहिलेदेखि उड्छ ?
on: April 18, 2019 बजार
साउनदेखि काठमाडौं–गुवाहाटी उडान गर्ने बुद्ध एयरको घोषणा, कोलकाता कहिलेदेखि उड्छ ?
वैशाख ५, काठमाडौं । निजी वायुसेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयर प्रा.लि.ले आगामी साउन १८ (३ अगस्ट, २०१९)देखि काठमाडौं–गुवाहाटी उडान शुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय उडान गन्तव्यलाई विस्तार गर्दै भारतको गुवाहटीमा हप्तामा दुई दिन उडान गर्ने घोषणा गरेको हो ।
कम्पनीका बजार निर्देशक रूपेश जोशीका अनुसार प्रत्येक हप्ता मंगलवार र शनिवार बिहान ७ बजे उडान गर्ने बुद्धको तयारी छ । नेपाल र भारतका पूर्वी क्षेत्रका आसाम, मेघालयलगायतका अन्य क्षेत्रलाई जोड्ने उद्देश्य रहेको कम्पनीले बताएको छ । योसँगै बुद्धले काठमाडौंको त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका तीन स्थानमा उडान गर्नेछ ।
हाल कम्पनीले काठमाडौं–बनारसमा हप्तामा दुईओटा उडान गर्दै आएको छ, भने आगामी जेठ १३ गतेदेखि काठमाडौं–कोलकाता उडान गर्ने बताइसकेको छ । काठमाडौं–कोलकाता उडान भने हप्तामा ३ पटक हुनेछ । यो उडान हरेक साताको सोमवार, बुधवार र शुक्रवार हुनेछ ।
शुरु भएको एक हप्ता नबित्दैं बुद्ध एयरको सन्ध्याकालीन उडान स्थगित
पोखरामा पनि ह्यांगर बनाउँदै बुद्ध एयर
नयाँ एटीआर–७२ भित्र्याउँदै बुद्ध एयर
वैशाखदेखि बुद्धको काठमाडौं–कोलकाता उडान